> Resource > Utility > Sida loo dayactir Ntdetect fashilmay Error
Waa maxay NTDETECT?
NTDETECT, magaca buuxa ee taas oo ntdetect.com, waa qayb ka mid ah nidaamyada hawlgalka Microsoft Windows NT shaqeeya on naqshadaha x86 ah. Waxaa mas'uul ka ah lagu ogaan karo qalabka aasaasiga ah iyo ururinta macluumaadka si aad kor nidaamka qalliinka. Marka NTLDR qaadataa in ka badan gacanta ku ah geedi socodka booting, NTDETECT lagu gawraco doonaa macluumaad iyo hardware la ururiyo oo la wareejiyo ntoskrnl.exe, yaruna Windows ah. File NTDETECT.com ku jira Windows XP, 2003 iyo Vista,
Marka aad kor booting nidaamka Windows iyo haddii ntdetect.com waxaa tirtiray, oo burburay ama ku kharribeen, geedi socodka kabaha aan u Dhawdihiin, iyo fariinta qalad ka dib waxaa lagu siin doonaa, "NTDETECT fashilmay". Mararka qaar, waxaa dhici karta inaad qabto arrimaha la ntldr iyo files boot.ini sidoo.
Sida loo dayactir NTDETECT fashilmay Error?
Xalka 1: Isticmaal Windows Recovery tacsiyeeyaan
Haddii aad qabto cajalid Rakibaadda Windows dhow, Way fududahay in la xaliyo arrinta NTDETECT fashilmay. Ma sidan:
1. computerka iyo isku xigxiga isbedel boot in CD-Rom ka dhigi doonaa sida qalabka boot hore, geliso Windows CD / DVD iyo guuleysatey mar kale.
2. Marka "Welcome to Setup" ee shaashadda u muuqataa, jaraa'id R inuu ku soo bilowdo tacsiyeeyaan Recovery ah .
3. In Recovery tacsiyeeyaan, ku qor password Maamulaha (maran by default, si uun wax miiran GALI).
4. Fuli socda amarrada. Haddii loo maleeyo in CD / DVD drive waa D: iyo drive nidaamka waa C :. Iyaga beddel sida uu kiiskaaga.
nuqul d: \_ i386 \_ ntdetect.com c: \_
5. Haddii an fariin qalad boot.ini aan waxba ka jirin waxa keenay, waxa kale oo aad u baahan tahay si ay u abuuraan file a boot.ini nooca in bootcfg / dhiska, waxa ay beegsadeen GALI.
Ku dar rakibo liiska boot? (Haa / Maya / All) - Nooca Y.
Ku qor aqoonsi Load: - Nooca Windows XP Professional ama Windows XP Home Edition aad doorashada ku menu kabaha.
Gala fursadaha Load OS: - waxaa daaya marnaan, kaliya Press GALI].
6. Qaado baxay CD iyo ka bixitaanka nooca hor cadaadinaya galaan, iyo computerka.
Xalka 2: Boot ilaa Computer kasta oo dayactir Dhibaatooyinka
Dadka isticmaala kuwaas oo aan cajalid Rakibaadda Windows ama isticmaala netbook oo caadi ahaan ma laha CD-Rom,
1. In la abuuro Downlaods CD / DVD ama USB drive la Liveboot on a booted computer Windows.
2. Geli drive CD, DVD ama USB ah, iyo reboot your computer.
3. Dooro "Boot ka LiveBoot" on Menu Boot in ay galaan nidaamka dalwaddii.
4. Dooro "Windows Recovery" oo guji Boot File Recovery si uu u xaliyo NTDETECT.com ku guuldareystay baadi.
5. Marka Recovery Boot File dhamaystiran, computerka aad.
6. Haddii dhalna ma lahayn kale, ka baadi NTDETECT fashilmay waa in lagu rakibaa, oo aad markaas ku arki kartaa desktop yaqaan.
Talooyin: dhibaatooyin badan oo ka tirsan Windows Vista in Windows XP iman kartaa marka ay hoos. Sidaa darteed, aad si weyn lagu talinayaa in la tirtiro oo nadiif ah drive adag oo ka hor ku rakibidda Windows XP. Oo waa inaad si fiican u diyaarin lahaa oo dhan wadayaasha adag ee gacmaha, maxaa yeelay, waxaad ku ogaan kartaa in qaar ka mid ah darawallada taageeraan kaliya Windows Vista.
Sida loo dayactir Ntoskrnl.exe qalad oo maqan
Sida loo celi MSN Password aan Email Alternative & Security Jawaab
Sida loo celi Windows Vista Password aan Loading ee
Dwwin.exe - DLL initialization fashilmay? Maxaad samaynaysaa?